Oko Kufuneka Ukwazi NgeMithetho YeLibel
Njengentatheli, kubalulekile ukuqonda izinto ezisisiseko somthetho wesigwebo. Ngokuqhelekileyo, iUnited States inomxholo okhuselekileyo kwihlabathi, njengoko kuqinisekiswe nguSilungiso sokuQala kuMgaqo-siseko wase-US . Abanyathelisi baseMelika bakhululekile ukuqhuba ingxelo yabo naphi na apho bangathatha khona, kwaye bahlakulele izihloko, njengoko iThe New York Times ithi, "ngaphandle kokwesaba okanye ukuthanda."
Kodwa oko akuthethi ukuba intatheli ingabhala nayiphi na into ayifunayo.
Iindlebe, i-innuendo, kunye neentloba zizinto ezinzima-abapheli beendaba abaphephe ngokubanzi (ngokuchasene nabalandeli beentlanzi). Okubaluleke kakhulu, abathathi-ntatheli abanalo ilungelo lokubethekisa abantu ababhalayo ngabo.
Ngamanye amazwi, inkululeko enkulu ifumana uxanduva olukhulu. Umthetho waseLibel yilapho inkululeko yonxibelelwano eqinisekisiwe yiSilungiso sokuQala ihlangabeza iimfuno zeendaba zengxelo.
I-Libel ishicilelwe ukuhlanjululwa komlingiswa, ngokuchasene nokuchaswa komntu ochazwe ngumlingisi, onyundela.
Ubonakalisa umntu inzondo, ukuhlazeka, ukuhlazeka, ukudideka okanye ukuhlekwa usulu.
Ukulimaza idumela lomntu okanye kubangela ukuba umntu avalwe okanye agwenywe.
Ukulimaza umntu kumsebenzi wakhe.
Imizekelo ingabandakanya ukumangalela umntu owenze ubugebengu obubi, okanye ukuba nesifo esingababangela ukuba bagwetshwe.
Amanye amabini amanqaku abalulekileyo:
I-Libel ingcaciso engamanga. Nantoni na into eyenza inyaniso ayinakuyinyani.
"Ishicilelwe" kulo mongo ithetha nje ukuba isalathisi esithethileyo sithunyelwa kumntu ngaphandle komntu oxolelwe. Oku kunokuthetha nayiphi na into evela kwinqaku ekhopiweyo kwaye isasazwa kubantu abambalwa kwibali elivela ephephandabeni enezigidi zababhalisi.
Kukho iininzi ezikhuselekileyo zokukhusela intatheli enxamnye necala lokugweba:
Inyaniso Ekubeni inkohliso ingcaciso engamanga, ukuba intatheli ibika into eyinyaniyo ayikwazi ukuba yinto enobungqina, nokuba ingonakalisa idumela lomntu. Inyaniso yinto efanelekileyo yokukhusela isalathisi. Isibalulekileyo senza ingxelo enzulu ukuze ukwazi ukubonisa into ethile.
Ilungelo leengxelo ezichanekileyo malunga neenkqubo ezisemthethweni - nantoni na evela kwinqanaba lokubulala kwi-bhunga le sixeko okanye kwi-hearing congressional-ayiyi kuba yindoda. Oku kungabonakala kukukhuseleka okungaqondakaliyo, kodwa cinga ukuba ugxininise ityala lokubulala ngaphandle kwalo. Kuyacaca ukuba, intatheli efihla eso sivivinyo inokugwetyelwa inkohliso rhoqo xa umntu othile enkundleni egwetyelwa ummangalelwa wokubulala.
Iingcamango ezilungileyo kunye neCriticism Lo mkhuselo uquka imibono yombono, yonke into evela kwiimvavanyo ze- movie ukuya kwiikholamu kwiphepha le-op-ed. Iingxelo ezilungileyo kunye nokugxeka ukukhusela ivumela abathengisi ukuba bavakalise izimvo kungakhathaliseki ukuba zibuhlungu okanye zibaluleke kangakanani. Imizekelo ingabandakanywa umgxekayo wegwala ekugqibeleni kwi-CD yakutsha ye-Beyonce, okanye obhala umlobi wezopolitiko okholelwa ukuba uMongameli uBabri wenza umsebenzi owonakalisayo.
Amagosa karhulumente kunye nabantu abaBucala
Ukuze uzuze umgwebo wobuxoki, abantu abazimeleyo bafuna kuphela ukubonisa ukuba inqaku malunga nabo laliyinyani kwaye lapapashwa.
Kodwa amagosa karhulumente - abantu abasebenza kurhulumente kwinqanaba lendawo, likarhulumente okanye lombuso - banexesha elinzima kakhulu lokuphumelela izigwebo ezingamanga kunabantu abazimeleyo.
Amagosa karhulumente makangayibonakali kuphela ukuba inqaku liyi-libelous kwaye lipapashwe; Kufuneka baqinisekise ukuba yashicilelwe nento ethiwa "inkohlakalo yangempela."
Ubulungisa obukhoyo kuthetha ukuba:
Ibali lapapashwa ngolwazi lokuba libuxoki.
Ibali lapapashwa ngokungenakukhathazeka ngokungakhathaliseki nokuba kwakungamanga.
Ixesha kunye noSullivan
Oku kuchazwa ngumthetho wesibhambathiso kuvela kwi-1964 US Supreme Court ruling Times kunye noSullivan. Kwixesha kunye noSullivan, inkundla yathi ukwenza lula kakhulu kumagosa karhulumente ukuphumelela izithintelo ezinokubakho ziza kuba nefuthe elibi kumaphephandaba kunye nokukwazi kwayo ukuxela ngokubalulekayo ngemiba ebalulekileyo yosuku.
Ukususela kwi-Times kunye no-Sullivan, ukusetyenziswa komgangatho "wobuntsholongwane" ukubonisa ubungqina obuye kwandiswa ukusuka kumagosa karhulumente kunamaqela karhulumente, okubhekiselele ekuthetheni ukuba ubani ophakathi kweso.
Kulula nje, oopolitiki, abadumileyo, iinkwenkwezi zezemidlalo, abaphathi beenkampani eziphezulu kunye nabo bonke abafana nabo kufuneka bafezekise imfuno "yobunene" ukuze bazuze i-suit belly.
Kwiingxelo zentatheli, indlela efanelekileyo yokukhusela i-suit evilisileyo kukuba wenze ingxelo ngokuxanduva. Ungabi neentloni malunga nokuphanda okungalunganga okwenziwe ngabantu abanamandla, ama-arhente namaziko, kodwa qi ni sekise ukuba unobungqina bokubuyisela oko utshoyo. Uninzi lwabagwebi bentetho luyimpembelelo yokunganiseki.
Indlela yokusebenzisa iiVebhu kunye neeNjongo zokubhenca iindaba zakho zeendaba
I-Gymnastics Hlangana noHlola uluhlu: Yintoni ozoyihambisa kwi-Gym Bag yakho
I-Admission University yaseNyakatho yeKentucky
Rousseau kwiBasetyhini kunye neMfundo
I "Big Six:" Abaququzeleli boMbutho wamaLungelo oLuntu
I-Denotation kunye neConnotation Exercise
I-PGA Tour Wyndham
Ngaba IWebhusayithi Yakho Yomsebenzisi?
Uthelekiso phakathi koviwo lwe-GRE oludala kunye novavanyo olubanzi lweGRE
Quotes eGeorge Carlin
Iifayile zeeVesi zokuThotyiswa kweeLwimi zesiTaliyane
IShedyuli yoTyelelo lwe-2018
I-MidAmerica Nazarene University